कर्णालीमा ६ जनामा डेंगुको संक्रमण, नडराउन प्रदेश अस्पतालको आग्रह
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश अस्पतालमा ५ जना तथा स्थानीय माया मेडिकल हलमा १ जनामा डेंगुको संक्रमण भेटिएको छ ।
भदौ २१ गतेपछि सुर्खेतमा ६ जनामा डेंगु भेटिएको हो । यसअघि बराहताल गाउँपालिका–१ का यलिना पुलामीलाई भदौ २१ गते डेंगु लागेको प्रदेश अस्पतालले पुष्टि गरेको थियो ।
त्यसपछि वीरेन्द्रनगर–६ का कृष्णा विक, ४ का उदय सुनार, भेरीगंगा–११ का लीला रिजाल, वीरेन्द्रनगरका शर्मिलादेवी न्यौपानेलाई डेंगुको संक्रमण देखिएको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा अस्पताल प्रमुख डा. डम्बर खड्काले बताए । उनका अनुसार थप १ जना माया मेडिकल हलमा डेंगुको उपचार गराइरहेका छन् । वीरेन्द्रनगरको यरिचोककी मीना रावतको मेडिकलमा उपचार भइरहेको छ ।
डेंगुबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन : डा. खड्का
मेसु डा. खड्काले डेंगुको उपचार सहजै हुने गरेको बताए । ‘अहिले जसरी डेंगुबारे जस्ता कुरा आएपनि डराउनुपर्ने अवस्था छैन । उपचार भइरहेको छ । उपचारपछि बिरामी घर फर्किरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर शुरूमा मेडिकलमा गई ज्वरोको औषधी लिने र त्यसले समस्या थप भएपछि मात्रै अस्पताल आउने क्रमले पैसा खर्च धेरै हुने गरेको छ । जहाँ डाक्टर छन्, त्यही गएर मात्रै उपचार लिन र दक्ष डाक्टरलाई मात्र चेकजाँच गर्न आवश्यक छ ।’
डेंगुबाट बच्न सबैभन्दा पहिले लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिनुपर्ने उनले बताए । ‘झुल लगाउनुहोस्, खाल्डाखुल्डी पुर्नुहोस् अनि कपडा शरीरभरि नै लगाउनुहोस्,’ उनले भने ।
तुलसीले गर्छ स्वास्थ्यलाई फाइदा, तर पात चपाउनु ठीक ...
यी हुन् स्टामिना बढाउने ९ आयुर्वेदिक उपाय
खाली पेटमा चिया-कफी पिउनुहुन्छ ? यस्ता ५ असर होला
यी हुन् सर्वाधिक कोरोना संक्रमित विश्वका १० देश (विवरणसहित)
भुटानमा आज थप ६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
भारतमा फैलिँदै कोरोना, विश्वका अन्य देशको तुलनामा एकैदिन यतिधेरै संक्रमित
लामो दुरीमा विद्युतीय मिनी बस सञ्चालन, माधव नेपालले गरे शुभारम्भ